NISY NY POA-BASY : Natelin’ny Srilankey iray ny vato mitentina 140 tapitrisa Ariary
Nisavoritaka indray ny tao amin’ny Fokontany Atsimondrova, Ambatondrazaka, tao amin’ny zana-bohitra Antsahamarova iny, ny alatsinainy lasa teo. 21 décembre 2016
Poa-basy nirefodrefotra no nanaitra ny olona manodidina sy ny mpianatra ao amin’ny lisea izay mbola nianatra tamin’io fotoana io.
Fantatra fa aferana vato sarobidy no rangory fototry ny olana. Nandeha ny feo fa nisy nanafika Srilankey tao amin’io toerana io ny androtr’io. Namory mpanao gazety avy hatrany anefa ireo olona avy any Tanambe, izay mpitrandraka handeha hivarotra vato fa izy ireo no voaendaka sy niharan’ny herisetra fa tsy marina io feo aely io.
Nambaran’i Fidèle, izay mpanelanelana amin’ny fivarotana vato fa izy no nitondra ireo olona nanana vato tao amin’ny Karàna iray mipetraka ao Antsahamarova, ny alahady 18 desambra lasa teo. Raikitra ny ady varotra ka nanomboka tamin’ny 16 tapitrisa Ariary no teti-bidy napetrak’ilay Srilankey izay nikasa ny hividy izany. Notombanan’ny tompony 200 tapitrisa Ariary kosa ilay vato sarobidy. Vato atao hoe “fantà” ny iray ary safira manga ny iray izay samy lafo vidy avokoa izy roa ireo hoy ireto namory mpanao gazety ireto.
Tafidina teo amin’io 140 tapitrisa Ariary io ny vidiny farany ho an’iretsy mpitrandraka sy ny mpanelanelana ary 40 tapitrisa Ariary kosa ho an’ny ankilany. Natsahatra teo aloha ny ady varotra satria alina ny andro, araka ny voalaza.Araka ny fomba fanao amin’ny fivarotana vato tahaka izao, hoy i Bennie na Armand izay tompom-bato dia napetraka tao amin’ilay Srilankey ireo vato ary dia lasa aloha izy ireo fa ny marainan’ny alatsinainy kosa indray vao niverina fa hitohy indray ny ady varotra. Io fomba io no antsoina hoe “mikimpy”, hoy ireto mpiserasera vato. Tonga ny fotoana ary dia niverina teo amin’ilay toerana izy ireo ary dia raikitra indray ny ady varotry ny roa tonta, izay tsy nisy olana mihitsy.
Nisy Srilankey iray izay tsy tao anatin’ny ady varotra mihitsy anefa tonga tampoka avy any ary naka ireo vato sarobidy miisa roa. Nentiny avy hatrany tany anaty fiara io vato io, hoy i Bennie. Nanenjika azy nivoaka i Fidéle araka ny nambaran’izy ireo saingy basy no nitsena azy. “Mbola nihevitra ity farany fa sangisangy ny zava-miseho ary dia niantso ireo tompom-bato izy mba hiatrika ny fandoavam-bola fa raikitra amin’ilay 140 tapitrisa Ariary ny resaka kinanjo mbola norahonan’ilay Srilankey tamin’ny basy ihany izy ireo”, hoy ihany ireto farany.
Niantso ny anabaviny avy hatrany i Bennie ary nilaza taminy ny tokony hangalany mpitandro filaminana haingana fa misy manambana basy izy ireo.
Efa nisy mpitandro filaminana hafa ihany koa anefa tonga tany tamin’io fotoana io.Vaky nandositra ireo mpitondra vato hamidy noho ny tahotra hoy ihany ny fanazavana nomen’i Bennie sy Fidéle. Nanamafy Ii Mirana, ilay anabavin’i Bennie fa izy no niantso ireo mpitandro filaminana roa mba hiaro ny zandriny noho io famoahana basy niseho io. Nirefotra ny basy saingy tsy ry zareo no nanao izany fa mety ho ilay Srilankey satria izy ireo no nanana basy tamin’io fotoana io.Nitsoaka nanavotra aina izahay ary vao mainka nitombo ny tahotra hoy izy ireo noho ilay fanapoahana basy niseho.Tsy azo intsony ny vatonay. Tsy ilay nitondranay ilay vato no nandroba fa ilay Srilankey izay tsy niatrika ny ady varotra rehetra ary tsy tao anatin’ny sera mihitsy.
Nilaza ny hampakatra ny raharaha ireto olona ireto nandritra ny tafa nifanaovany tamin’ny mpanao gazety.Tsy ny Malagasy mihitsy hoy izy ireo no nandroba fa ireo srilankey izay naka an-keriny ny vaton’izy ireo kanefa mahagaga fa izahay indray no lazaina fa saika handroba sy nanapoaka basy kanefa izahay aza tsy manana basy akory hoy ireto mpitrandraka nitafa tamin’ny mpanao gazety ireto.
Hatreto aloha , samy mbola miandry ny ho tohin’ny raharaha ny rehetra ary samy liana avokoa ny amin’ny hoe iza no tena manana ny marina amin’ny roa tonta .
Naiditra am-ponja ilay lehilahy, arahin’ny Fitsarana maso ilay vehivavy namany FISOLOKIANA AVO LENTA (158) 14 octobre 2020 Sarona ilay mpamily nitsoaka sady mamo nandona moto nanao taingin-telo ALASORA (98) 16 octobre 2020 Nitombo iray indray ireo sekoly tsy miankina nikatona mba hiarovana ireo kilonga ANTSIRANANA (78) 16 octobre 2020 Mpiambina sivily iray nigadra, roa hafa navotsotra ZAZAVAVIKELY ROA VOAOLANA TENY IVATO (76) 19 octobre 2020 Mpanendaka gaigilahy roa nidoboka am-ponja eny Antanimora ASAN-JIOLAHY ENY ISOTRY (61) 16 octobre 2020 “Mahalany potika plastika 125g isam-bolana ny mpanjifa hazan-dranomasina ” FAKO (52) 19 octobre 2020